छोरा अनमोलसँगै निरुता र भुवनको जम्ने भो जोडी ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodछोरा अनमोलसँगै निरुता र भुवनको जम्ने भो जोडी !
February 9, 2019 Tulasa Karki Kollywood, News, Video 0
अनमोल केसीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘क्याप्टेन’मा समावेश एक गीतको छायांकनमा केहि दिन अगाडि सकिएको छ ‘कर्ली कर्ली’ बोलको गीतको छायांकनमा अनमोलका पिता तथा नायक भूवन केसी र नायिका निरुता सिंहलाई दर्शकले एकसाथ् उक्त गीतमा देख्न पाउने छन् ।
गीत छायांकन सकिए संगै भुवन र निरुताले सुत्र इन्टरटेनमेन्टसँग अन्तर्वार्ता दिएका छन् । अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यी दुबैले उक्त गीत दर्शकको लागि नयाँ स्वाद पाउने बताएका छन् । यो गीतको छायांकन सकिए संगै यो गीतले दर्शकहरुलाई निकै एक्साईटेड बनाउने र दर्शकहरुको लागि यो फिल्म नयाँ वेशको हुने बताएका छन् ।
२५ वर्ष अगाडि आफुले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा निरुताले भुवन सँग डेब्यु गरेको र अनमोललाई आफुले काखमा खेलाएको बच्चा अहिले मेघा स्टार हुदा आफ्नै बच्चाले यति प्रगती गरेको अनुभव भएको निरुता बताएकी छिन । साथै भुवन र अनमोलको साथमा आफुले काम गर्न पाउदा आफुले निकै प्राउड फिल गरेको बताएकी छिन ।
यो फिल्म अनमोलको रोजाईमा बनेको र दर्शकहारुको लागि यो फिल्म नयाँ चिजका साथ् आउने छ । यो फिल्मले खेल,प्रेम, रोमान्स संगसंगै राष्ट्रियता झल्काउने छ भने विशेषत फूटबल खेलाडीहरुको लागि यो फिल्म निकै खास हुने बताएका छन् ।
बलिउड सेलिब्रेटीहरुको पर्सनल होलिडे ( फोटो फिचर )